विदेशी विनिमय सञ्चितिमा दबाब पर्दै गएपछि सरकारले गाडी, सुन, मदिरालगायत विलासी वस्तुको आयातमा कडाइ गर्‍यो । मदिरा आयातमा त प्रतिबन्ध लगाएपछि बजारमा यसको स्टक रित्तिएको छ तर अवैध बाटोबाट मदिरा आउन भने रोकिएको छैन ।
सरकारले विलासिताका वस्तुको आयात घटाउने रणनीतिअन्तर्गत गत चैतको दोस्रो सातादेखि विदेशी मदिरा आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । नेपालमा रू. २ अर्बको हाराहारीमा विदेशी मदिराको आयात हुने गरेको थियो र यसबापत सरकारले त्योभन्दा बढी राजस्व प्राप्त गर्ने गरेको थियो । मदिरा आयातमा प्रतिबन्ध लागेपछि त्यसबापत आउने सरकारको आमदानी घटेको छ । तर, व्यवसायीहरू भने मर्कामा परेका छन् ।
विदेशी मदिरा आयात हुन दिनुपर्छ, स्वदेशी मदिरा उद्योगको पनि संरक्षण हुनुपर्छ । त्यसो हुँदा मात्र मदिराको बजार सन्तुलित हुन सक्छ र आपूर्ति शृंखला यथावत् रहन सक्छ ।
सरकारले मदिरा आयातमा प्रतिबन्ध लगाउनुको मुख्य कारण विदेशी विनिमय सञ्चिति बलियो बनाउनु थियो । तर, मदिराको आयात ठूलो परिमाणमा नहुने भएकाले यसले तात्त्विक असर पारेको देखिँदैन । अहिलेको विदेशी विनिमय सञ्चितिले १२ महीनाको आयात धान्न पुग्ने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । सामान्यतया ७ महीनाका लागि आयात धान्न पुग्ने विदेशी विनिमय सञ्चितिलाई पर्याप्त मानिन्छ । यो सञ्चिति बढ्नुमा पेट्रोलियम आयातमा कमी आउनु, गाडी र यसका पार्टपुर्जा आयात कम हुनु प्रमुख कारण हुन् । पर्याप्त सञ्चिति भएको अवस्थामा सरकारले ठूलो राजस्व उठाउने मदिरा आयात खुला गर्नु तर्कसंगत देखिन्छ ।
मदिरामाथि प्रतिबन्ध लगाउँदा मदिरा आयात ठप्प भएको छैन भन्ने देखिन्छ । तस्करहरूले अवैध आयातको नेटवर्क बनाउन थालिसकेको आशंका छ । यस्तो नेटवर्क बन्यो भने यसलाई तोड्न लाग्ने खर्च निकै ठूलो हुन्छ । यस्तो मदिरा उपभोग गर्ने उच्च वर्ग र धनाढ्य नै हुन्छन् । उनीहरूले कुनै न कुनै माध्यमबाट विदेशबाट मदिरा ल्याइरहेका छन् । यसरी मदिरा भित्रिँदा एकातिर सरकारले राजस्व गुमाएको देखिन्छ भने अर्कातिर बजारमा नक्कली विदेशी मदिरा विक्री सहज बनाएको छ । यो जनस्वास्थ्यका लागि घातक हुने देखिन्छ । विदेशी मदिरा स्वास्थ्यका लागि कम हानिकारक हुने बताइन्छ । मदिरा आयातमा प्रतिबन्ध लगाउँदा जनस्वास्थ्यमा सकारात्मक असर पर्ने तर्क पनि गरिन्छ । तर, यसले उल्टो असर गरेको पाइन्छ ।
मदिरा आयात रोक्नुको अर्थ विदेशी मुद्रा जोगाउनु नै हो । तर, दुई अढाइ सय प्रतिशत भन्सार लाग्ने भएकाले थोरै विदेशी मुद्रा खर्च भए पनि राजस्व भने राम्रै उठ्ने देखिन्छ । यति धेरै राजस्व आउँछ भने ट्रेड अफ गर्ने कि नगर्ने भनेर सोच्नु उपयुक्त हुन्छ । मदिरा आयातमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदा अवैध आयातलाई प्रोत्साहन मिलेको छ । बरु, सरकारले विदेशी मदिरामा अझै भन्सार बढाउँदा हुन्छ । विदेशी मदिरामा कर बढाउँदा सामान्य जनतालाई असर नपर्ने भएकाले विरोध पनि खासै हुने देखिँदैन ।
मदिरा आयातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि व्यवसायीले पहिले गरेको विक्रीको रकम उठाउन सकेका छैनन् । व्यवसायीको पुराना बक्यौता उठ्न नयाँ आपूर्ति व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसो हुँदा यस व्यवसायको आपूर्ति शृंखलालाई जीवित राख्न पनि विदेशी मुद्रा आयात रोकिनु हुँदैन । बाँकीबक्यौता नउठ्दा व्यवसायीले बैंकलाई पैसा तिर्न पनि गाह्रो भएको छ ।
मदिराको व्यापारका सबै खराब पक्ष मात्र छैनन् । अर्थतन्त्रकै कुरा गर्ने हो भने मदिराभन्दा सुन आयातमा प्रतिबन्ध बढी तर्क संगत देखिन्छ । यद्यपि सुनको आफ्नै महत्त्व छ ।
विदेशी मदिरा प्रतिबन्ध गरेर नेपाली मदिरालाई प्रवर्द्धन हुने तर्क पनि गरिन्छ । तर, अहिले नेपाली मदिराको विक्री पनि घटेको छ । व्यवसायीका अनुसार यसको विक्री ३० प्रतिशतमा झरेको छ । त्यस्तै मदिरा कम्पनीका नाफा घटेको छ । नेपाली मदिरा उद्योगमा रू. ५० अर्ब लगानी भएको छ भने यसको वार्षिक बजार ९० अर्बको हाराहारीमा रहेको बताइन्छ । कुल राजस्वमा मदिराको योगदान १७ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । यस्तोमा विदेशी मदिरा आयात हुन दिनुपर्छ, स्वदेशी मदिरा उद्योगको पनि संरक्षण हुनुपर्छ । त्यसो हुँदा मात्र मदिराको बजार सन्तुलित हुन सक्छ ।